Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Sida Loo Badbaadiyo Tuulo Dalxiiska Shaaha leh
Barxadaha shaaha ayaa u ekaa jaranjaro waaweyn oo dhalaalaya, oo dhalaalaya qorraxda deyrta ee culus, iyadoo geedaha shaaha cagaaran ee qurxiyey ay ka soo baxeen caleemaha jilicsan ee magaalada Liubao dabayaaqadii Oktoobar.
Waxay ahayd isla markii ay soo degeen Barafka, 18-kii ee 24-kii qoraxda, Oktoobar 23. Dadka deegaanka ayaa ku mashquulsan goosashada caleemaha. Tani waxay ahayd wakhti wanaagsan oo cibaadada ah. Udgoonka caleemaha ayaa lagu tiriyaa inuu yahay kii ugu fiiqan, sababtoo ah farqiga heerkulka u dhexeeya habeen iyo maalin ee sanadka oo dhan iyo biyaha roobka oo yar.
Kaliya maahan beeralayda kuwa xirayay geedaha dhexdooda, laakiin booqdayaasha sahaminta soo jiidashada miyiga ee magaalada ayaa fadhiya degmada Cangwu, Wuzhou, ismaamulka Guangxi Zhuang.
Booqdayaasha waxay caadi ahaan keenaan dareen dhaqdhaqaaq magaalada sida caadiga ah xasilloon bisha Oktoobar, sida ay dawladda hoose sheegtay. Qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaa sameeya waxa dadka deegaanka ay sameeyaan: inay garbaha ku qaataan dambiilaha bamboo oo ay soo qaataan caleemaha shaaha. Dabiici ahaan, waxay iska dhigaan sawirro ka soo horjeeda barxadaha soo socda iyo cirka buluugga ah ee cad.
Dhamaadka maalinta, dadka socotada ah waxay ku raaxaysan karaan shaaha, iyagoo baranaya shiil iyo duubista caleemaha qaabkii hore, halka udgoonka uu ka soo qulqulayo dheryo kulul oo hawada ku jira.
Kosima Weber Liu, oo u dhalatay dalka Jarmalka, ayaa bishii Oktoobar booqatay magaalada, waxaana aad ula dhacay shaaha halkaasi ku yaalla, gaar ahaan saamaynta uu ku leeyahay daawaynta.
"Waxaan kaliya ka maqlay hababka shaaha-samaynta ka hor, laakiin waxaan la kulmay sida ay u egtahay in aan shiilo shaaha naftayda," Liu ayaa tiri.
Waxay si fiican u fahamsan tahay habka iyo dhaqanka ku xeeran.
"Waxaan dareemay inaan tagay meel gaar ah oo qarsoodi ah oo ku taal Shiinaha."
Magaalada Liubao waxa ay caan ku ahayd shaaha madow oo muddo 1,500 oo sano ah, ay ahayd mid macaan. Waxay leedahay shuruudo ku habboon soo saarista shaaha, oo leh dheellitirka huurka, qoraxda, ciidda iyo kor u kaca, qiyaastii 600 mitir ayaa ka sarreysa heerka badda, taasi waxay ku dhowdahay inay run noqoto.
Shaaha Liubao waxaa loo arkaa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan dalka waxaana loo adeegi jiray abaal marinta Emperor Jiaqing intii lagu jiray Boqortooyada Qing (1644-1911).
Waxa kale oo loo isticmaali jiray dawo dhireed si looga hortago xaaladaha kulul iyo qoyaanka markii dadka Shiinuhu u haajireen Koonfur-bari Aasiya dhammaadkii qarnigii 19-aad.
Shaaha Liubao waxa la soo saari karaa guga ilaa dayrta. Inkasta oo caleemaha ka soo baxa guga hore loo tixgeliyo kuwa ugu jilicsan oo sidaas tayada sare leh, waxay wataan dhadhan gaar ah marka la goosto dayrta dambe.
Maamulka deegaanka ayaa sanadihii la soo dhaafay waday horumarinta shaaha iyo dalxiiska isku dhafan.
" Dalxiisayaal badan, 'qallafsan' oo isku daraya hoy, beero iyo waayo-aragnimada shaaha-qaadista ayaa bilaabmay," ayuu yidhi Cao Zhang, xoghayaha xisbiga ee magaalada Liubao.
Tuulada Dazhong, ee koonfur-bari ee Liubao, Liang Shuiyue ayaa, macno ahaan, dhadhamiyay faa'iidooyinka dalxiiska miyiga.
Waxay maamushaa guri guri taasoo dakhli joogto ah u keenta qoyskeeda.
Dakhliga wadajirka ah ee Dazhong wuxuu gaaray 88,300 yuan ($ 13,810) sannadkii hore, ka dib markii dadka deegaanka lagu dhiirigeliyay inay horumariyaan jardiinooyinka shaaha ee hoos yimaada barnaamij isu keena ganacsiga, kormeerka iskaashiga iyo qoysaska miyiga ah.
Dazhong waxa ay heshay 150,000 oo booqde intii lagu jiray Bandhiga Gu'ga ee sanadkan tuuladuna waa qayb ka mid ah suunka soo noolaynta miyiga ee maamulka Liubao uu ku dadaalayay inuu dhiso.
Hadafka waa in la horumariyo "dariiq shaaha" oo gaar ah, guryaha miyiga ah iyo jardiinooyinka shaaha cagaaran ee daawashada, iyo in la abuuro muuqaal gaar ah, oo leh tuulooyinka muujinaya astaamo kala duwan, ayuu yidhi Cao.
Matxafka shaaha ee Liubao wuxuu siiyaa booqdayaasha dhadhan dhammaystiran oo ku saabsan waxa ku lug leh u keenista cabitaanka soo cusboonaysiinta koob qofka.
Khani Fariba iyo Ishtiaq Axmed oo ah lamaane u dhashay dalka Iran ayaa la yaabay jaceylka shaaha ah ee ku xiran xiliga ay booqanayeen madxafka.
Qaybtii hore ee qarnigii 20-aad, dadka deegaanka waxay hadiyad ahaan u siin jireen shaaha Liubao iyo milix aroosadda si ay u muujiyaan kalgacal waara, maadaama shaahu uu ka yimid buurta, milixduna ay ka timaaddo badda.
Tuulada Tangping ee u dhow, dhaxalka dhaxalka dhaqameed ee aan la taaban karin, Wei Jiequn, 63, iyo gabadheeda Shi Rufei, 34, waxay ku dheggan yihiin farsamooyinka dhaqameed, oo ay ku jiraan qalajinta, dubista iyo khamiirinta caleemaha.
Waxa ay tuulada ka wadaan tabobar ay dalxiisayaashu ku baran karaan dhaqanka shaaha ee Liubao iyaga oo la kulma habka wax soo saarka ee soo jireenka ah.
Shi waxa uu hormuud u ahaa caawinta dadka deegaanka oo kor u qaaday dakhligooda iyaga oo shaaha ka samaysanaya. Shi waxa ay ku adkaysatay in ay ikhtiraacdo farsamooyinka shaaha samaynta ee soo jireenka ah oo ay khibradeeda la wadaagto reer miyiga deegaanka.
Laga soo bilaabo 2017 ilaa 2020, aagga beerashada shaaha ee Liubao ee gobolka Cangwu wuxuu ka kordhay 71,000 mu (4,733 hektar) ilaa 92,500 mu, sida ay sheegtay dawladda hoose. Wax-soo-saarka shaaha sannadlaha ah wuxuu ka socday 2,600 tan ilaa 4,180 tan muddadaas saddexda sano ah, iyada oo qiimaha wax soo saarka uu ka badan yahay labanlaab min 310 milyan ilaa 670 milyan yuan.
2025, qiimaha wax soo saarka shaaha Liubao ee Wuzhou wuxuu gaari doonaa in ka badan 50 bilyan yuan, ayuu yiri Zhong Changzi, duqa magaalada Wuzhou.
"Asal ahaan, waxaan sii wadi doonnaa inaan horay u sii soconno si aan u abuurno 100 bilyan yuan warshadaha," ayuu yiri Zhong.